Hurricane Florence - Gargaarka Musiibada ee Musiibada
Tani waa fariin deg deg ah
Duufaanta Florence ayaa la saadaalinayaa inay ku dhufan doonto xeebta waqooyiga iyo Koonfurta Carolina dabayaaqada usbuucaan (laga yaabo inay tahay habeenka Khamiista). Tani waxay noqon doontaa duufaantii ugu weyneyd ee ugu horreysay ee ku dhufata Mareykanka sannadkan iyo hadda waxaa jira shaki yar oo ah in tani ay noqon doonto musiibo weyn, oo daba dheeraata. Haddii aad ku nooshahay ama u dhowdahay aagga musiibada waxaan kugu boorinaynaa inaad bilowdo isu diyaarinta hadda.
- Hurricane Florence ayaa la rajeynayaa inay ku soo dhacdo dhul gariir ka dhaca xeebta Carolina sida a Qaybta 4 duufaanta oo wata dabaylaha ilaa 145 mph. Waa goor hore in la sheego halka saxda ah ee ay duufaantu ku dhufan doonto iyo cidda ay wax u yeeli doonto burburka dabayshu.
- Florence waxay noqon doontaa duufaan aad u weyn. Ayadoon loo eegayn halka ay ka dhigayso dhul-gariir, aag ballaaran ayaa saamayn doonta. Qayb weyn oo ka mid ah xeebta gobolka Carolina ayaa waxaa soo foodsaaraya daadad xoog leh oo daadad leh.
- Kadib markay si dhakhso leh ugu dhaqaaqdo dhulka, Florence waxaa la filayaa inuu istaago. Tani waxay u badan tahay inay keento roobab aad u culus iyo daadad waaweyn oo gudaha ka dhaca oo ku baahsan waqooyi-bari South Carolina, koonfur-galbeed West Virginia, iyo Waqooyiga Carolina iyo Virginia dhammaadka toddobaadkan.
- Wadada suurtogalka ah ee duufaanta waxaa sidoo kale ka mid ah nus darsin geedaha tamarta nukliyeerka, godad ku haynta dhuxusha-ashkarka iyo qashinka kale ee warshadaha, iyo beero badan oo bari ah oo ku keydsan qashinka xayawaanka harooyinka hawada weyn.
Ma adkayn karno sida ay xaaladdu halis u tahay. Sida saadaasha kasta, waxaa jira xoogaa hubanti ah, laakiin kalsoonida ayaa sarreysa in tani ay noqon doonto duufaan weyn. Waxaad ka aqrisan kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan Hurricane Florence halkan.
Waqtigii la qaban lahaa waa hadda
Sida dawlada iyo wakaaladaha aan macaashka aheynba ay bilaabayaan inay u diyaar garoobaan duufaantan, jaaliyadeena waa inay hada u dhaqmaan sidii ay isu taageeri lahaayeen, u sii noolaan lahaayeen una hubin lahaayeen in la fogeeyo iyo in dadka halista la galiyo.
Musiibooyinka heerkan, bulshooyinka la fogeeyey ayaa had iyo jeer laga tegay, oo waxaa jira dad badan oo faqiir ah, Madow, iyo bulshooyinka reer miyiga ah ee ku teedsan mawjadaha duufaantan. Sidii had iyo jeerba, dadku waxay ku xirnaan doonaan caawimaadda labada dhinac si loo badbaadiyo maalmaha soo socda. Isu diyaarinta hadda wax weyn ayey ka beddeli kartaa.
Haddii aad ku nooshahay aagagga musiibada ee suuraggal ah, soo uruuri sahayda loo baahan yahay ugu yaraan maalmo. Tan waxaa ka mid ah cuntada, biyaha, tooshka, baytariyada, sahayda gargaarka degdegga ah iyo lacag haddii ay suurtagal tahay. Ka dhig taleefankaaga inuu mas'uul noqdo iyo haanta gaaska inay buuxdo illaa duufaanta. Hubso inaad hesho cusboonaysiinta ugu dambeysay ee xiritaanka waddooyinka maadaama daadgureyntu ay horeyba u socotey wadooyin badanna la xiri doono markey duufaantu ku soo dhowaato inay soo dhacdo.
Maskaxda ku hay baahiyahaaga gaarka ah ee qoyskaaga iyo deriskaaga, oo ay ku jiraan dawooyinka iyo awooda daadgureynta ama marin u helida meelo nabdoon ka hor duufaanta.
Ka fikir qaxitaanka ama aaditaanka gabaad aamin ah. Sidoo kale ka digtoonow in dadka nugul sida kuwa aan bilaa sharciga ahayn, kuwa qaba arrimaha caafimaadka maskaxda, dadka leh arrimo sharci oo aad u sarreeya iyo dadka la soo deristay hoy la’aan ma dareemi karaan raaxo ama badbaado hoyga xaaladaha degdegga ah halkaas oo booliisku ay ku sameyn karaan baaritaannada ayna u isticmaali karaan sida jiidista si loo xidho. Haddii ay suurtagal tahay, la xiriir hooyga xaaladaha degdegga ah ee ka jira bulshadaada si aad u kala ogaato haddii booliisku ay ka baarayaan aqoonsiga guryaha hoyga. Intaa ka dib, in macluumaadkan sida ugu suurtagalka badan bulshada loogu helo iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada / xaashiyaha iyo hadalka afku waa muhiim.
Isku day inaad dukumiintiyadaada muhiimka ah dhigtid meel aamin ah kuna xir bac baco xiran. La xiriir asxaabtaada iyo kuwa aad jeceshahay oo iska hubi inay fiicnaan doonaan, iyadoo fiiro gaar ah loo siinayo maxaabiista, dadka ay la soo daristo hoy la’aan, dadka naafada ah, kuwa ka shaqeeya beeraha, dadka waayeelka ah, iyo taariikh yarooyinka kale ee la takooro.
Sidookale, ka fikir xiriirada, shabakadaha, iyo hantida aad horey ugu laheyd bulshadaada. Aaway meeqa suurtagal ee lagu fulin karo dadaallada gurmadka baahinta ee baahsan? Deeq noocee ah ayaad siin kartaa? Waxa ugu weyn ee looga hortago cabsida waa in lala yimaado asxaabtaada aad aaminto iyo saaxiibadaa iyo istaraatiijiyadda si wada jir ah aad iskugu joogtaan.
Gurmadka deg-degga ah ee heeganka degdegga ah ee degdegga ah ee gobolka:
(Fiiro gaar ah: Hoygayadan wali lama xaqiijin jiritaanka bileyskan waqtigan)
Furitaanka hoyga South Carolina
Furitaanka hoyga bariga North Carolina
Xirmooyinka xayawaanka ee saaxiibtinimo u furan North Carolina hoyga
Furitaanka hoyga VA Beach
Cusbooneysiin toos ah oo ku saabsan jihada duufaanta, xoojinta iyo digniinaha la soo saaray.
Shabakada Gargaarka Musiibada ee Isku-duuban waxay diyaar u tahay diyaarna u tahay inay gacan ka geysato baahi kasta oo soo baxa. Fadlan gaadhsii sidaad awood u leedahay. Marwalba waad nagala soo xiriiri kartaa [Email ilaaliyo]
Asxaabteena wanaagsan ee Blue Ridge Automatous Defense Crew iyo Tidewater Solidarity Collective ayaa durbaba isku diyaarinaya inay wax ka qabtaan. Haddii aad ku nooshahay meel u dhow ama aad safri karto, oo aad jeceshahay inaad ka jawaabto sidoo kale, isku day inaad xiriir la sameysato asxaabtaada, xiriirada dhaqdhaqaaqa, iyo kuwa aad jeceshahay ee aagagga ay saameynta ku yeelan karto hadda taasoo si weyn u fududeyn doonta jawaab deg deg ah oo lagu dhisay ogolaanshaha bulshada iyo go'aan ka gaarista.
Ka fikir suurtagalnimada aruurinta sahayda ama tabarucaadda lacageed ee loogu talagalay dadka ay saameeyeen. Ogoow in waddooyinka laga yaabo inay waxyeelleeyaan, gaas yari ayaa dhici karta oo koronto ayaa laga yaabaa inay banaanka timaado, oo u qorshee si habboon. Haddii Hurricane Florence ay keento waxa loo malaynayo inay noqon doonto burburin baahsan, caawimaad ayaa loogu baahan doonaa dadaal joogto ah, sidaas darteed muddo gaaban iyo sidoo kale soo kabashada muddada fog iyo dadaallada gargaarka ee labada dhinacba waxay noqon doonaan muhiim.
Nabdoonaanta dabeylaha oo idil,